Maxay ka wada hadleen Qalbi Dhagax & Xildhibaan Odawaa? - Awdinle Online
Maxay ka wada hadleen Qalbi Dhagax & Xildhibaan Odawaa?
Wasiirkii hore Arrimaha Gudaha Xildhibaan C/raxmaan Odawaa ayaa markii u horeysay maanta Nairobi kula kulmay C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax).
Xildhibaan Odowaa ayaa qeyb ka ahaa dadkii sida weyn uga soo horjeestay dhiibistii DFS ay Itoobiya u dhiibtay Qalbi Dhagax 3 sano ka hor, iyadoo lagu xusuusto khudbadii taariikhiga aheyd ee uu ka jeediyay fadhigii Baarlamaanka markii la horkeenay qaraarkii lagu diiday ee sharci darro looga dhigay dhiibistiisa.
” Magaalada Nairobi oo aan maalmahan ku sugnaa ayaan Maanta kulan Qado sharafeed Iyo Is xog wareysanno ku yeelanay Halgamaa Abdikarim Sheikh Muuse (QalbiDhagax) iyo Akhiyaar la socotay, Gardaradii iyo gef kii Caddaa ee Nadaam ka hadda jira ay u geysteen iyo duruufaha uu maray ayuu iiga waramay.
Wuxuu ahaa kulan keeni ugu horreeyay ee aan Halgamaaga isku aragnay tan iyo gefkii taariikhiga ahaa ee Loo geeystay.
Waxa uu Ka mahad celiyay sida quruxda iyo qiimaha leh ee ay bulshada soomaaliyeed u difaaceen, kaalinta lama illaawaan ka ah ee ay dad badan oo mas’uuliyyiin ah ooga dhiidhiyeen.
Xildhibaan Odawaa oo qoraal soo dhigay Bartiisa Facebook ayaa ka hadlay waxyaabihii ay ka wada hadleen Qalbi Dhagax, waxaana uu yiri”
Previous articleWaqtiga la dooranayo Guddoonka Baarlamaanka Hir-Shabeelle oo la shaaciyay
Next articleSomalia, Masar & Jarmalka oo ka wada hadlay Arrimo muhiim ah